Onye isi ịsa ahụ nke China, ụgbọ okporo ígwè ịsa ahụ, Shattaf Bidet Spray - Huanyu Sanitary Ware
Njikọ Ọhụrụ Square Black Shower
Anyị na-ebunye nchikota ịsa ahụ ojii ọhụrụ square nwere ọdịdị conical, nnukwu mmiri na-acha anụnụ anụnụ, isi awọ na elu chrome-plated. Ọ na-ewu ewu nke ukwuu n'ahịa Middle East, na ọnụ ala dị ala na ezigbo mma. Oge ikike ya bụ afọ 2, na ndụ ọrụ karịrị afọ 5.
Ngwakọta ịsa ahụ Black Matte
Anyị na-ebunye ngwakọta ịsa ahụ Black matte nwere ọdịdị conical, nnukwu mmiri na-acha anụnụ anụnụ, isi awọ na elu chrome-plated. Ọ na-ewu ewu nke ukwuu n'ahịa Middle East, na ọnụ ala dị ala na ezigbo mma. Oge ikike ya bụ afọ 2, na ndụ ọrụ karịrị afọ 5.
Ngwakọta Plating na Black Shower
Anyị na-enye nchikota ịsa ahụ Plating na ojii nwere ọdịdị conical, nnukwu mmiri na-acha anụnụ anụnụ, isi awọ, na elu chrome-plated. Ọ na-ewu ewu nke ukwuu n'ahịa Middle East, na ọnụ ala dị ala na ezigbo mma. Oge ikike ya bụ afọ 2, na ndụ ọrụ karịrị afọ 5.
Nnukwu ngwakọta ịsa ahụ efere ihu
Anyị na-enye ngwakọta ịsa ahụ buru ibu nke nwere ọdịdị conical, nnukwu mmiri na-acha anụnụ anụnụ, isi awọ na elu chrome-plated. Ọ na-ewu ewu nke ukwuu n'ahịa Middle East, na ọnụ ala dị ala na ezigbo mma. Oge ikike ya bụ afọ 2, na ndụ ọrụ karịrị afọ 5.
Atọ ọrụ Obere Top ịsa isi
Atọ ọrụ obere n'elu ịsa isi, beige na ọcha panel nwere mmiri ojii, pụrụ nnọọ iche, atọ ụzọ ntinye mmiri na-abawanye ahụmahụ ndị ahịa.
Obere isi mmiri ịsa ahụ nwere oghere mmiri siri ike
Obere size electroplating obere top ịsa isi otu oge ịkpụzi panel na ọlaọcha tinyekwa onu, elu-edu àgwà na nnọọ asọmpi price.Welcome to buy Small Top Shower Head With Hard Water Outlet from us.